ဂျပန်နိုင်ငံက ဖြစ်ရပ်မှန်လေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်များမှာအများအားဖြင့် သစ်သားနံရံပါးနှစ်ခုကို အလယ်တွင်နေရာလွတ်လေးထားပိတ်ပြီး နံရံထူတစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်တတ်ကြသည်။ တစ်နေ့အိမ်ပြင်ရန် နံရံကိုဖွင့်ဖျက်လိုက်သောအခါ တောက်တဲ့လေးတစ်ကောင် အတွင်းပိုင်း၌ တွယ်ကပ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရ၏။ အပြင်မှရိုက်သေ ာသံတစ်ချောင်းသည် ထိုအကောင်ငယ်လေး၏ ခြေတစ်ဖက်ကို ထိုးစိုက်ဝင်နေလျက်သား တွေ့လိုက်ရသည်။ သူဒီမြင်ကွင်းလေးကိုမြင်တော့
တစ်ချိန်တစ်ခါက နော်လွီဇာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက် ပါးဖောင်းဖောင်းလေးပေါ်မှာ သူ့အလှကို ပိုဖြည့်စွက်ပေးတဲ့ မှည့်သေးသေးလေး တစ်လုံးရှိပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးရှိသူ နိုက်တင်ဂေးလ်လို သာယာတဲ့အသံနဲ့ တေးသီချင်းများသီဆိုတတ်တဲ့ ရေဒီယိုအဆိုတော်တစ်ယောက် ဆိုပြီး လူသိများကြပါတယ်။ သူမကို (၁၉၄၁) ခုနှစ် မတ်လ
၁။ လူရှေ့သူရှေ့မရှောင် အိမ်ထောက်ဘက်ကို အပြစ်တင်ခြင်း အိမ်ထောင်သက် ရလာတာနဲ့အမျှ အထစ်အငှော့လေးတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင်တဘက်သားကိုအပြစ်တင်ရန်ထောင်ရင်တော့ ရန်ပွဲဖြစ်လာမှာပါ။ အဲလိုရန်ဖြစ်တာ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အပြင် မီးလျှံထဲကို ဓါတ်ဆီလောင်းလိုက်သလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျရင် ဘယ်သူမှ
Villagers in Lormi village, Chhattisgarh district, India, heardababy crying and foundanewborn baby inahaystack. In
A woman walks around the city naked, painted in the form of trousers. A woman wanders around the city, undressed,
She has nine husbands and has been married 11 times. A 52-year-old woman who has been married 11 times has
How can you prevent Monkeypox? Monkeypox is an infectious disease caused byavirus that is related to the smallpox
A rare and valuable anthill is found inside the antlers. The feet are about These are unique items found in
The man who locked the girl’s jeans because he was afraid of being betrayed when he was not with her
A barber shop that is famous online for its good service from beautiful women. Hairdressers know the right way to
An African culture in whichaman is about to get married toafour-legged penis Ladies and gentlemen